Antsirabe, Antsiranana, Toamasina, Fianarantsoa, Nosy Be: nihanaka ka tafakatra 70 ireo tratran’ny coronavirus | NewsMada
Efa manenika faritra maro. Nambaran’ny filoham-pirenena, omaly, fa nisy tranga vaovao 11 tratran’ny Covid-19 indray ka anisan’izany ny vehivavy iray avy any Fianarantsoa. Tafakatra 70 izany izao ireo mitondra ny valanaretina. Nampanantena ny tenany fa haka fanapahan-kevitra ny fitondrana ka hanaovany fanambarana ny alahady izao.
Nambaran’ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololotiana Hanta, omaly atoandro fa nisy tranga enina vaovao tratran’ny coro­navirus. Niainga amin’ny valin’ny fitiliana avy eny amin’ny Insitut Pasteur (IPM) izany. Ahitana lehilahy efatra : 49 sy 47 ary tanora 16 sy 19 taona izy ireo. Miampy tovovavy 20 sy 14 taona. Tafakatra 70 izany izao ireo tratran’ny coronavirus. Niampy dimy indray izany ny hariva araka ny nambaran’ny filoha Rajoelina Andry. Anisan’izany ilay vehiva­vy avy any ivelany, tonga tany Fianarantsoa. « Tokony ho nihiboka izy io saingy mbola nampivavaka ary tonga hatrany Lalangina », hoy izy. Narahina izany fifaneraserany izany ka nanaovana fitiliana olona 15. Fito ireo tsy mitondra ny soritr’aretina ary arahi-maso ny roa. Andrasana kosa ny valin’ny fitiliana ireo hafa.
Fizarana sarom-bava 5 tapitrisa maimaimpoana
Nialoha izany, nitsidika orinasa afakaba teny Tanjombato ny filoha Rajoelina. Fantatra tamin’izany fa hividy sarom-bava miisa 5 tapitrisa ary hozataina maimai-poana ny fanjakana. Hisitraka izany ny mpivarotra, mpitandro filaminana, mpitarika posy na sarety na ny olona iray miantsena amin’ny isan-tokatrano. « Fitaovana manampy hisa­kanana ny covid 19 amin’ny alalan’ny piti-drora io sarom-bava io », hoy izy. Azo sasana amin’ny savony sy pasohana izany sarom-bava izany. Anton’izany koa ny tsy handroahan’ny orinasa mpiasa.
Mahavita 150 000 isanandro ilay orinasa. Efa nahazo fanomezana miisa 50 000 avy hatrany ny fanjakana, miampy 10 000 isa ary hozaraina tsy ho ela…
Hamory ny solontenan’ny herivelona
Manoloana izany, tapitra ny 15 andro, nihibohana. Nambaran’ny filoha fa hamory ireo lehiben’ny Andrimpanjakana, ny FFKM, ny olom-boafidy sy ny tompon’andraikitra any amin’ny faritra ahitana ny valanaretina, anio ny tenany. Eo koa ny hifampiresahany amin’ireo profesora sy ny hanaovana filan­kevitry ny minisitra, hijerena ny ezaka vita sy ny tombana. « Tsy ho mora fa sarotra ny fanapahan-kevitra… Hodinihina ny ara-toekarena. Ho zaka ve ny miatrika izao… Dinihina sy fakafakaina ny fanapahan-kevitra. Efa misy coronavirus any Nosy Be, Ambatomanga, Fianarantsoa, Morondava, Antsirabe. Vitsy sisa ny toerana tsy misy izany », hoy ihany ny filoha.
Araka izany, andrasana ny hambaran’ny filoha amin’ny alahady izao aorian’izany fihaonana rehetra izany.